Nwee Ogwu Pita Na - eje Ozi Na - eri Akwụkwọ Nkuzi maka FREE - Mmasị Mma
Home » Book » Were Pita na-eje ozi na-eri akwụkwọ nri maka FREE
Ruo obere oge naanị, Peter Servold na-enye akwụkwọ ọhụrụ Ntụziaka Peleo a na-akpọ Paleo Erie maka FREE!
Paleo Na-eri ihe dị iche iche na-esi ísì ụtọ. Edere nri nri maka onye na-achọta ntụziaka ọhụrụ na pụrụ iche. Ihe nchịkọta ihe nchịkọta Gourmet Paleo na-apụta na akwụkwọ nri a na-enweghị n'efu dị mfe na mfe ime. Otutu nri ị nwere ike ime n'okpuru 30 nkeji.
Nke a bụ ụfọdụ n'ime nri ị nwere ike ime:
The Iri nri Na-eri akwụkwọ nri njirimara nchịkọta nke 80 nnukwu ihe nchịkọta gourmet Paleo recipes. Akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-abụghị akwụkwọ dijitalụ ị na-ebudata. Nri nri bụ kpamkpam Ị ga-akwụ ụgwọ ntakịrị maka mbupu. Akwụkwọ a ga - abụ FREE maka obere oge nanị, naanị Peter nwere oke nkè iji nye ya ka ị jide n'aka na ị ga - enweta ya mgbe ị nwere ike. Pịa n'okpuru ebe a iji nweta gị
Ọ bụrụ na ị na-achọ Paleo dessert Ezi ntụziaka nakwa, jide n'aka na bulie oyiri Kelsey Ale's FREE Paleo dessert uzommeputa akwụkwọ karịrị na http://www.paleosweetsbook.com
Enweghị ihe ọ bụla a ga-emegharị na Paleo Eats FREE Paleo Akwụkwọ Nchịkọta Akwụkwọ. Ihe ị kwụsịrị ịkwụ ụgwọ mgbe ị nwetara akwụkwọ a bụ ụgwọ ọrụ ị na-ebu. Akwụkwọ nri a na-edozi ahụ bụ n'ezie 100% n'efu, ọ bụkwa ụzọ Pete na-esi enweta ihe ngosi maka akwụkwọ nri akwụkwọ nri ya. Biko mara na ebe nrụọrụ weebụ a nwere ike ịnweta ụgwọ maka ịzụrụ nke ị na-ekwu maka njikọ biko hụ Nzuzo Nzuzo anyị maka ozi ndị ọzọ.